माओ त्से तुङ भाग्नुपरेको त्यो क्षण « Tuwachung.com
१. ७ किलो गाँजासहित काँग्रेस नेता पक्राउ
२. हलेसी तुवाचुङ नगर सरकारलाई १८ बुँदे सुझाव
३. घरमै खुलमखुला गाँजा प्रशोधन गरी बिक्री गर्नेलाई प्रहरीले कर्याप्पै
४. मेयरको दसैं
५. हलेसीमा दसैं
६. ५ तस्बिरमा गायिका इन्दिरा जोशी
७. स्थानीय कलाकारको बेजोड अभिनय रहेको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
८. ‘बुवा बनेर कमाएर ल्याएपछि आमा बनेर पकाएर खुवाउँछु’
९. तर पनि हामी खुसी
१०. यसरी लेख्न सकिन्छ थेसिस (पाठ १ देखि २९ सम्म)
११. बाबुआमाको नाक जोगाउँदै, गीत गाउँदै श्रेया
१२. ७ तस्बिरमा अभिनेत्री मनीषा कोइराला
माओ त्से तुङ भाग्नुपरेको त्यो क्षण
अनिल शर्मा विरही	२०७७ आश्विन १८, २०:२७
बेइजिङबाट हिँड्दाजस्तो ढिलो नहोस् भनेर सतर्क थिएँ । बिहान ६ः४५ मा तयार भइसकेको थिएँ । गोविन्द भट्टराईको फोन आएपछि खाजाका लागि बाहिर निस्किएँ । तीर्थ कोइरालासँग जम्काभेट भयो । हामी तीनजना खाजा खान जाँदै थियौं । ‘हिजो राति तपाईंहरू त भाग्नुभएछ नि,’ तीर्थ भन्दै थिए । हिजो चिनियाँ र नेपालीको संयुक्त दारुपानी रहेछ । गोविन्द र म एक–एक गिलास चिया खाएर फुत्त निस्केका थियौं । ‘मानिस कता हराउँछन् कता भन्दै म पनि भागें,’ कोइराला भन्दै थिए ।
हाम्रो कार्यतालिकामा ८ः३० मा ‘चेक आउट’ थियो । ८ः२० मा लबीमा पुगें । बिहान ९ बजे सुचाउ क्याम्पसबाट सांघाईका लागि बस चढ्नुपथ्र्यो । क्याम्पसको आँगनमा चीनकी Xian Jiaotong र बेलायतका लिभरपोल पोलो खेलिरहेको आकर्षक स्मारकमा सामूहिक फोटो लियौं । ‘गिर खेल भारतमा हक्की भएको छ र बेलायत पुग्दा पोलो भएको छ,’ माधव पौडेल मूर्ति हेरेर भन्दै थिए । निर्धारित समयमा बस अगाडि बढ्यो । मूलद्वारमा पुगेपछि पथप्रदर्शक सोङले बस रोक्न संकेत गरे र चिनियाँ भाषामा ‘तपाईंहरूले आफ्नो केही सामान होटलमा छाड्नुभएको छ कि ?’ भनेर सोधे । त्यसपछि बस अगाडि बढ्यो ।
सुचाउमा पनि कतै चरा कराएको सुनिएन । ‘भोटे मोराले वनका चरा पनि खाएर सके कि क्या हो ?,’ तीर्थ सदावहार हँस्यौलोपाराले भन्दै थिए । ‘टेलिफोन, विद्युत् र आणविक ऊर्जाका कारणले लोप भएको होला,’ कोही भन्दै थिए । कृषिमा प्रयोग भएको अत्यधिक विषादी र कारखानाको रसायन अर्को कारण हुन सक्थ्यो । मन्थन चलिरहेको थियो । कुनै विषय थिएन । जसको मनमा जे उम्रन्थ्यो, त्यही विषयमा छलफल हुन्थ्यो । ‘चीनको यात्रा समाजवादतिर हो कि पुँजीवादतिर हो ? अथवा भगवान् कृष्णजस्तो ब्रह्मचार्यमा बस्ने, १६ हजार गोपिनी पनि राख्ने गरेझैं हो कि ?’ चन्द्रकिशोर प्रश्न गर्दै थिए । आर्थिक सम्बन्धले अरू सम्बन्ध निर्धारण गर्छन् । उत्पादन सम्बन्धमा पुँजीवाद भएपछि राजनीतिमा समाजवाद हुन सक्दैन । सामूहिकतामाथि निजत्वको प्रभुत्व कि सामूहिकताको निजत्वमाथि प्रभुत्व ? यो प्रश्न पुँजीवाद र समाजवादबीचको आधारभूत प्रश्न हो । चीनले विश्वभरि पुँजीको विस्तार गरेको छ । त्यसको रक्षाका लागि सेना पछि–पछि जानैपर्छ । बेलायतले सुरुमा धर्म, त्यसको फेर समाउँदै औद्योगिक उत्पादन र त्यसपछि सेनाको लर्को लगाएको थियो । चीनले ‘विन–विनको नीति’ विदेश नीतिका सम्बन्धमा भनेको छ । जसमा समाजवादी भावना प्रकट हुन्छ । तर, त्यो चीनको आजसम्मको सत्य हो । साम्राज्यवादीको बजार खोस्दै गएपछि उनीहरू चुपचाप वनबास लाग्लान् त ? अर्को सत्य के हो भने बजार कब्जा गर्ने पश्चिमी प्रयोग पुरानो भएको छ । अबको एकाधिकार पुँजीवाद नयाँ अनुहारमा प्रकट हुनेछ । पुरानै अनुहार नयाँ रूपमा आउलान् कि पुरानै रूपमा अहिले नै भन्न सकिन्न । इतिहासको उदय र अस्तको कथा क्षणिक विषय होइन ।
बिहानै मौसम सफा थियो । हामी सुचाउको औद्योगिक क्षेत्र हुँदै दक्षिण सांघाईतिर लाग्दै थियौं । पथप्रदर्शक सोङले सांघाईको परिचय गराइरहेका थिए । फिनिक्सले सानो हातेमाइकबाट सोङको चिनियाँ व्याख्यानलाई अनुवाद गरिरहेकी थिइन् । हामी Jinojing Road हुँदै हान्निएका थियौं । ढुंगाका दुईतले, चारपाखे सफा, चिटिक्क परेका घर थिए । कतिपय घरमा राता झन्डा देखिन्थे । सडकको दुवै किनारामा बाक्ला रूखले घर छपक्कै छोपेका देखिन्थे । नदी र ताल यत्रतत्र थिए । जमिन र पानीमध्ये कुन भाग धेरै होलाजस्तो लाग्थ्यो । जलवाहन बगे्रल्ती रहेका हुन्थे ।
डेढ घन्टा समय बिताइसकेका थियौं । एउटा नदी तरेपछि फिनिक्सले ‘हामी सांघाई पुगिसकेका छौं’ भन्नासाथ सबै खुसी भए । हामी पुरानो सांघाईतिर लागेका थियौं । जाम भएर एक घन्टाभन्दा बढी सडकमा बस्नुप¥यो । सांघाईको पुरानो आवास क्षेत्रमा साँघुरा सडक, घनाबस्ती र भीड देखिन्थ्यो । चीनका कुना–कुनाबाट मानिस व्यापार, उद्योग र रोजगारीका लागि सांघाईमा बसाइँ सरिरहेका छन् । त्यसो त सांघाईमा संसारभरिका मानिस थुप्रिएका छन् । चीनको मुख्य आर्थिक नगरी सांघाई संसारकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको सहर हो ।
बसबाट ओर्लिएर हामी सन् १९२० मा बनेको पुरानो शैलीको घरमा निर्मित संग्रहालय हेर्न गयौं । सन् १९२१ जुलाई १ मा त्यही घरमा अध्यक्ष माओसहित १३ प्रतिनिधि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रथम अधिवेशनका लागि जम्मा भएका थिए । त्यसबेला देशभरिमा ५० पार्टी सदस्य थिए । जसलाई ‘सांघाई सम्मेलन’ भनिन्छ । सो सम्मेलन चलिरहेको चौथो दिन सरकारी गुप्तचरले सूर्यको पाएपछि प्रतिनिधि सरकारी घेरा तोडेर जियासिङ काउन्टीको नान्हु सरोवरमा डुंगाबाट यात्रा गरेर थप एक दिन सम्मेलनमा भाग लिई कार्यक्रम सम्पन्न गरेका थिए । अध्यक्ष माओ त्यसबेला अधिवेशनका कनिष्ठ सदस्य थिए । अधिवेशन भएको घरमा प्रतिनिधि पेकिङ विश्वविद्यालयबाट सांघाई घुम्न आएका विद्यार्थी हौं भनेर बसेका थिए । तर, निशाचरले भेद पाइसकेका रहेछन् । त्यही ऐतिहासिक ‘सांघाई सम्मेलन’ को स्मृतिमा सो घरलाई संग्रहालय बनाइएको रहेछ । भवनमा प्रवेश गर्दासाथ सुनौलो रंगको हँसिया, हथौडा झन्डा र चीनको नक्सा देखियो । हाम्रो सम्पूर्ण यात्राका व्यवस्थापक, पार्टी सदस्य, क. वाङले मलाई तान्दै ल्याएर झन्डा अगाडि उभ्याए । मुठ्ठी उठाएर सलाम गर्न लगाए । मेरो फोटो लिएपछि बूढीऔंलो ठाडो पार्दै ‘हामी एक हौं’ भन्ने भाइचारा भाव प्रकट गरे ।
पेकिङ विश्वविद्यालयका पुस्तकालय अध्यक्ष तथा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक लि चाओ डीन छन् तु स्युलगायतका बुद्धिजीवीले चीनमा सन् १९१८ मै समाजवादको प्रचार गर्न थालिसकेका थिए । त्यसबेला पेरिसमा बसिरहेका चाउ एन लाई र तङ स्याओ पिङ साम्यवादी विचार फैलाउने विचारले चीन फर्के । रेनमिन विश्वविद्यालयका साहित्यकार लु सुन अर्का प्रचारक थिए । जो पछि जापानबाट स्वास्थ्यविज्ञान अध्ययन छाडेर स्वदेश फर्केका थिए । त्यसैगरी अध्यक्ष माओ त्से तुङ, तोङ प्यु, चाङको थाओ आदि युवाले चीनमा समाजवादको प्रचार गरिरहेका थिए । चीनको दुरावस्था, विदेशी अतिक्रमण र पटक–पटकका आन्दोलनका असफलताले चिनियाँ जनतामा साम्यवादप्रति आकर्षण बढाउँदै लगेको थियो । त्यसैबीच सन् १९१९ जुलाईमा सोभियत संघले चिनियाँ जनताको नाममा पाँचबुँदे घोषणापत्र जारी गर्यो ।
(१) अघिल्लो रुसी सरकारले कब्जा गरिराखेका चीनका भू–भाग चीनलाई नै फर्काइनेछ ।
(२) अघिल्लो सरकारले अधिनस्थ गरेका चीनका पूर्वी रेलमार्ग, खानी, जंगल इत्यादिलाई चीनकै स्वामित्वमा फिर्ता गरिनेछ ।
(३) चीन सरकारले रुसलाई दिँदै आएको युद्धको क्षतिपूर्ति रकम अब उप्रान्त तिर्नुपर्ने छैन ।
(४) चीनमा बसोबास गर्ने रुसी नागरिकले पाइआएका विशेष सुविधा खारेज गरिनेछ ।
(५) अघिल्लो रुसी जार सरकारले चीनमाथि लादेका सबै असमान सन्धिलाई खारेज गर्ने ।
रुसी सरकारको घोषणापत्रले चीनमा साम्यवादको विस्तारमा अकल्पनीय योगदान पु¥याएको थियो । त्यही पृष्ठभूमिमा सन् १९२१ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको थियो ।
हामी संग्रहालय घुमिरहेका थियौं । एक ठाउँमा उसबेलाका मजदुरको दसपत्र टालेको भोटो, ट्राउजर राखिएको रहेछ । मनै खिन्न हुन्थ्यो । भयानक गरिबी, अभाव, पीडा, भोकमरीबाट चीन गुज्रेको थियो । क्रान्तिले एउटा शक्तिशाली चीनको निर्माण गरेको छ । संग्रहालयमा चिनियाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन, अध्यक्ष माओ र तात्कालिक घटना झल्कने थुप्रै सामग्री सुरक्षित रहेछन् । समयको निकै चाप थियो । संग्रहालय हतार–हतार अवलोकन गरेर हामी ‘लन्च’ का लागि होटलतिर लाग्यौं ।
होटलको मूलद्वारामा पुग्नासाथ ढोकाको एकापट्टि पंक्तिबद्ध भएर उभिएका किशोरीले लयात्मक स्वरमा केही भनिरहेका थिए । हामीलाई स्वागत गरिएको बुझ्न सकिन्थ्यो । मीठो संगीत बजिरहेको थियो । ‘हट्ली वेलकम टु यु’ लय मिलाएर चिनियाँ भाषामा भनिरहेका छन्’ फिनिक्सले हाम्रो जिज्ञासा पूरा गर्दै भनिन् । हामीहरू ‘निहाउ’ भन्दै भित्र प्रवेश गर्यौं । चीन यात्राको मज्जा भनेकै खाना हो भनिन्छ । हामी भित्र पुग्नासाथ टेबलमा ८४ व्यञ्जन खाना तयार भइसकेको थियो । टेबलमा बस्दासाथ कोठामा ‘रेशम फिरिरी’ गीत गुञ्जिरहेको थियो । सांघाई हाम्रो भ्रमण व्यवस्था गर्ने संस्थाका उपमहासचिव ची पिङको गृहनगर पनि हो । नेपाललाई औधी माया गर्ने सांघाईका उदीयमान नेता ची पिङले आफ्नो नगरमा हाम्रा लागि अलि बढी नै अतिथ्यता व्यवस्था मिलाएछन् भन्ने लाग्थ्यो ।
हामी खाना खान थाल्दै थियौं । बेइजिङबाट आएका ची पिङ टुप्लुक्क आइपुगे । उनी निरन्तर हामीसँग छन् । उनको शालीनता लोभलाग्दो छ । उनीसँगको भेटघाट, चिनजान एक हप्ताको नभएर पुरानो नाता भएझैं महसुस भइरहेको थियो । ‘यिनलाई भेट्दा पुरानो साथी भेटेझैं लाग्यो,’ मैले गोविन्द भट्टराईलाई भनें ।
अपराह्न २ बजे सांघाई समूहसित अन्तत्र्रिmयाको निर्धारित कार्यक्रम थियो । सञ्चारकर्मी ल्यु ज्याङ चिङ र ची पिङले कार्यक्रम व्यवस्थापन गरेका थिए । Changhua सडकमा रहेको सञ्चार गृहको सभाकक्षमा गोष्ठी थियो । अलिनो चिनियाँ खाना, चीन र नेपालको समयको हेरफेरका कारण रक्तचाप घटेर समस्या भएको थियो । चिनियाँ हरियो चियाले झन् रक्तचाप घट्दो रहेछ । उता कार्यक्रम चलिरहेको थियो, माधव पौडेलले बोल्नेक्रममा ‘तपाईंहरूले सुचाउलाई चीनको भेनिस भन्नुहुँदोरहेछ तर सुचाउ पूर्वको भेनिस हो । यद्यपि, भेनिस भन्दा सुचाउ धेरै ठूलो छ,’ भनेका थिए । त्यहाँ पनि केही साथीले कूटनीतिक मर्यादा ख्याल नगरी बोलेका थिए । टोलीनेता र किशोर श्रेष्ठलाई रफ्फु भर्दैमा हैरान थियो । नेपालको बौद्धिक जगत्मा व्यक्तिवाद, अराजकता र विशृंखलतालाई स्वतन्त्रताका अर्थमा बुझ्ने गरिएको छ ।
‘डिनर’ लिएर होटलमा पुग्दा साँझ सातमात्र बजेको थियो, बजारतिर घुम्न गइयो । फिनिक्स, निर्मला, स्वेच्छा, गोविन्दलगायतका साथीहरू थिए । सांघाईमा रात्रिजीवन सुरु भइसकेको थियो । सडक, चोक, क्लब, डबली जताततै बूढाबूढी जोडी–जोडी भएर नाचगान गरिरहेका देखिन्थ्यो । स्वास्थ्य खाना र व्यायामका कारणले होला भुँडे चिनियाँ देखिँदैनथे । ‘महिला भुँडे त देखिएकै छैन त, पुरुष फाटफुट देखिन्छन्,’ स्वेच्छा भन्दै थिइन् । ‘भारतमा भएको भए भुँडीको प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो,’ श्रीलाल साह भन्दै थिए । हामी भारतको जेलमा हुँदा गुजरातिले लैनो गाईको फाँजजत्रा अण्डकोष र फर्सिजत्रो भुँडी भएका विहारीको संख्या झन्डै आधा हुन्थ्यो । साथीहरू किनमेल गर्दै थिए । हाम्रो अर्को टोली मूलमै भेट भयो । त्यसपछि राति नौ बजेतिर होटलमा फक्र्याैं । थकाइ र निद्राले शरीर लथ्रक्क परेको थियो ।
सेन्टर इन्टरनेसनल होटल, सांघाई
२०७१ असार ४/ २०१४ जुन १८
जासुसी गर्न चंगा - October 25, 2020
गाउँदेखि सहरसम्म पिङ - October 25, 2020
दसैं–गीत - October 25, 2020
दसैं, तिहार, छठ आउँदा घर जानेको ताँती मलाई पनि खोज्दै होलान् बाल्यकालको साथी । हिजोआज
दसैं हजुरबाको प्रतिविम्ब
हुन त धेरै नै वर्ष भइसक्यो पुरानो भयो, फाट्यो अन्त्यमा मक्किएर धुजाधुजा भई खै कहाँ
सदाझैं यसपालि पनि दसैं आइसकेको छ । अघिल्लो र यस वर्षको दसैंमा खासै भिन्नता नभए
‘बुवाआमा हङकङमा हुनुहुन्छ,’ हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका खोटाङका मेयर इवन राईले सुनाए, ‘जेठा दाइले दसैं मान्नुहुन्न
जासुसी गर्न चंगा
दुर्छिम (खोटाङ) । मनोरञ्जन लिने उपाय कति छन् कति । जानियो भने चंगा उडाएरसमेत मनोरञ्जन
गाउँदेखि सहरसम्म पिङ
दुर्छिम (खोटाङ) । वर्षमा एकपटक पिङ खेल्नुपर्छ भन्ने भनाइ छ । गाउँमात्रै होइन, सहरमा समेत